Casha sharaftii Madaxweyne Xasan Sheikh uu u sameeyey qaar ka mid ah Xildhibaanada labada Aqal oo daaha ka qaadey in Doontiisu ay degayso | puntlandi.com
Monday, January 30th, 2017 | Posted by Pi
Casha sharaftii Madaxweyne Xasan Sheikh uu u sameeyey qaar ka mid ah Xildhibaanada labada Aqal oo daaha ka qaadey in Doontiisu ay degayso
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa xalay casho sharaf u sameeyay Xildhibano ka tirsan dawlada Federaalka Soomaaliya, waxaana kulanku uu qayb ka ahaa kulamada caadiga ah ee Xildhibaanadu ay la qaadanayeen Musharixiinta Soomaaliya.
Musharax kasta oo ku sugan Muqdisho wuxuu la kulmaa Xildhibaanada si wada jir ah iyo si kali kali ah, taas oo qayb ka ah Ol’olaha Muqdisho ka socda
Kulankiii Xalay Muxuu Ka Badalnaa Kulmadii Dhacayay.
Kulankii xalay uu Xassan Sheekh la qaatay Xildhibaanada Soomaaliya wuxuu kaga badalnaa dhowr arrimood oo lagu marin hababiyay xaqiiqda kulanka, tirada Xildhibaanada ka qayb galay iyo fikirka ay aaminsan yihiin.
Warbixinta oo aan ku soo bandhigayno Cadaymo ayaan uga hadlanaa wixii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta Gobolka Banaadir.
Tirada Xildhibaanada ka qayb galay kulanka sida saxda kama badnayn Afartan Mudane, kuwaas oo kala ahaa Xildhibaano Xassan taageersan iyo Xildhibaano uu Xassan caasumay oo uu u sheegay inuu kulan casho ah la qaadanayo oo kaliya.
Xildhibaano ka tirsan dawada Federaalka oo ka qayb galy kulanka iyo Mudanayaal aan ka qayb galin, ayaa sheegay in tirada Xildhibaanada kulanka ka qayb galay laga been sheegay, sido kalena la marin habaabiyay kulanka oo casho oo kaliya ay u tageen.
Xildhibaanadu Ma Leyihiin Afhayeen?
Xildhibaan Xidig, Suudi Yalaxow, Dalxa iyo Cabdullaahi Sheekh ismaaciil Fartaag Iyo Xildhibaano kale, ayaa ka hadlay kulankii xalay ay ka qayb galeen Afartanka Xildhibaan.
Xidig iyo Suudi Yalaxow si cad ayay u sheegen inay taageersan yihiin Xassan Sheekh Maxamuud, waxaase la yaab lahayd markii ay tirada Xildhibaanada ka qayb galay cash sharafta ku sheegen 190 Xildhibaan, sido kalena ay sheegen in xattaa kuwo maqan ay taageersan yihiin Xassan Sheekh Maxamuud.
Labadaa Mudane hadalkooda wuxuu ahaa mid ay ka dambaysan Villa Soomaaliya, waxayna u hadleen si isku mid ah, iyada oo ujeedadu ay tahay in marin habaabin lagu sameeyo xaqiiqda Muqdisho taal.
Xildhibaanada kale ayaa codkooda la jarjaray, waxaana laga soo reebay qayb loo muujiyay inay ku taageren Xassan Sheekh.
Mid ka mid ah Afartanka Xildhibaan ee ka qayb galay kulanka ayaa sheegay inuu aad ula yaabay sida ay u hadleen Xidig iyo Yalaxow, wuxuuna xusay inuusan jirin qof ay u Wakiisheen inuu afkooda ku hadlo oo waliba ka been sheego codka ay xambaarsan yihiin oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed, wuxuu xusay in Xildhibaanada kulanka joogay ay ahaayen Afartan qiyaastii, haddii aysan kaba yarayn.
Warbaahinta ku hadasha Afka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa saaka qoray Warar aan sal iyo raad lahayn, waxaana qaybtood ay xadgudub ku sameeyen codka Xildhibaan Dalxa iyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ay jarjareen, waxay sheegen in kulanka ay ka qayb galeen 190 Xildhibaan, balse waxay ahayd inay meesha ka saaraan sawirada ay soo bandhigeen oo ay ka muuqdaan Agaasimayaashii iyo shaqaalihii Madxtooyada, waxaa sawirada ka muuqda in 60 qof ay ka qayb galeen kulanka, waxaa Lixdankaas aad ka garan doontaan Afartan Xildhibaan oo kaliya inay kulanka fadhiyaan.
Waxaa xusid mudan in Xildhibaano badan oo Xassan uu casho sharafta ugu yeeray aysan iman, ka dib markii ay ogaadeen in kulanku uu waji kale xambaarsan yahay.
Maanta waxaa Muqdsiho . gaar ahaan xarumaha Musharixiinta Isbadal doonka ah laga hadal hayaa inay cadahay in Soomaaliya uu ka dhacayo 8-da febaraayo Isbadalka ay doonayaan Ummadda Soomaaliyeed, si la mid ah midkii dhacy xilligii Doorashadda Guddoomiye ku xigeenada 1-aad iyo 2-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaater, kulankii xalay uu Xassan la qaatay Afarta Xildhibaan ayaa noqday Maadays ay ku kaftamayaan Xildhibaanada Soomaaliya, waxaana muuqata in doonta Madaxweyne Xasan Sheikh ay degayso, oo uusan Xildhibaanada Caqliga saaxiibka la ah Ayan sinaba hada waa sinaba Aysan u dooneyn iney dib u daawadaan Filimkii uu Madaxweyne Xasan Atooraha ka ahaa afartii sano ee lasoo dhaafay.
Si aad fahan uga qaadato Sawirada inta aadan daawan, sawirka 1-aad waa sawir si guud loo qaaday, waana tirada dadka saxda ah ee meesha fadhiya, sawirada xigaya waa sawiro laso dhoweeyay oo dadka looga qaaday tirada is xigta.